Himalaya Dainik » २२८ प्रतिशतले बढ्यो कोभिड संक्रमण, २० प्रतिशतलाई अक्सिजन आवश्यक
२२८ प्रतिशतले बढ्यो कोभिड संक्रमण, २० प्रतिशतलाई अक्सिजन आवश्यक
12 seconds अगाडी
काठमाडौं : कोेरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा मुलुकभर फैलिँदै गएको छ। गत साताको तुलना यो साता २ सय २८ प्रतिशतले संक्रमित बढेका छन्।
सघन उपचार कक्ष (आईसीयू), भेन्टिलेटर र अक्सिजन अभावले समस्या झन् जटिल बन्ने विज्ञ बताउँछन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अर्चना श्रेष्ठले नेपालमा एक जना संक्रमितले दुई व्यक्तिलाई संक्रमण सारिरहेको बताइन्।
डा. श्रेष्ठका अनुसार संक्रमणदर हेर्ने हो भने विभिन्न मुलुकमध्ये नेपालको उच्च छ। ‘गत वर्ष भारतभन्दा नेपालमा संक्रमण एक महिना पछाडि थियो। यो वर्ष नेपालले पनि भारतको जस्तै मोड लिँदै छ’, डा. श्रेष्ठले भनिन्, ‘भारतभन्दा नेपालमा संक्रमणदर धेरै बढेको छ।
पोजेटिभ दर बढ्दै जाँदा समुदायमा संक्रमण छिटो फैलिरहेको बुझ्न सकिन्छ। मृत्युको संख्या पनि बढेको छ। यही दरमा बढ्दै गए एक वर्षमा देखेको संक्रमितको संख्या अबको तीन महिनाभित्रमा नै देख्नेछौं।’
‘जनस्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएपछि स्वाब दिन र नतिजा नआइञ्जेलसम्म भेटघाट नगरिदिनु होला। यति गरे पनि संक्रमण दर घट्न पुग्छ’, निर्देशक डा. पौडेलले भने।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार १३ हजार ८ सय ८९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४ हजार ७ सय ७४ मा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै ९ सय बढीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १ सय २३ जनामा गरेर ४८ सय ९७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भक्तपुरमा २ सय ३२, ललितपुरमा ३ सय ५१ र काठमाडौंमा १४ सय ६४ गरेर उपत्यकामा २ हजार ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
भयावह वीरगन्जः कोरोनाबाट एकैदिन ५ को मृत्यु, ४३ को अवस्था जटिल
गण्डकी प्रदेशसभामा खैलाबैलाः जनमोर्चाका सांसद अनुपस्थित
कोरोनासँग लड्न खानुस् किवीको जुस, यस्ता छन् फाइदा !
‘शव वाहन’ नपाएपछि मोटरसाइकलमा बोकियो ‘लास’ (भिडिओसहित)
भारतमा पहिलो पटक एक दिनमै कोरोनाबाट ३ हजार बढीको मृत्यु